9 bilood ayey ku noqon karta sannad iyo bar qaraabada la mideeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
9 bilood ayey ku noqon karta sannad iyo bar qaraabada la mideeyo
La daabacay torsdag 6 oktober 2016 kl 15.21
"Halkan keli kuma noolaan karo"
Tabbeelaha hayadda socdaalka. sawir: Sawirle: Ludvig Thunman/TT
Muddo garsii-san sannad illaa iyo sannad iyo bar ayay ku qaadan kartaa cidda ku talo jirta inay qaraabadood dalkan kula midoobaan, halka uu xeerka dalka u degsani qorayo in aanay muddadaasi ka badnaan sagaal bilood.
– Haddii toban jeer xiriir lala sameeyo waxaad helaysaa toban jawaabood oo kala duwan oo la xiriirta haddba cidda aad la hadasho, sida uu sheegay ninka lagu magacaabo Jens oo muddo sagaal-bilood ah ka war-dhoowrayay.
Goormaa kuugu dambeeysay oo aad xiriir la sameeysay?
– Toddobaadkii ina dhaafay ayaa iigu dmabeeyay oo aan la xiriiro, iimana aanay suurto-gelin inaan cid helo. Inta jeer oo aad wacdana wax mane ah sameeyn meeyso. Inkastuu fikirkaygu yahay inaan tuso un inaan la i ilaawin.